काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा केही परिवर्तन,अब के खुल्छ, के खुल्दैन ? – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा केही परिवर्तन,अब के खुल्छ, के खुल्दैन ?
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा केही परिवर्तन,अब के खुल्छ, के खुल्दैन ?
admin June 2, 2021 समाचार Leaveacomment 150 Views
काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा केही परिवर्तन भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन भएको जनाएको हो । निषेधज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै अबदेखि खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, अनलाइन डेलीभरी, किताब पसल बिहान १० बजेसम्म खुल्न दिने भएको छ ।
प्रशासनले उद्योग, निर्माण कार्य सुरक्षित ढंगले काम गर्न पाइने, ढुवानी सामग्री राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने गरी मोडालिटी तयार गरेको छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर बिहान १० बजेसम्म वर्कशप सञ्चालन गर्न पाइने छ । उद्योगले कामदारको आवासीय व्यवस्था मिलाएर काम गर्न सक्नेछन् । आवासीय प्रबन्ध मिलाएमा सञ्चालनका लागि प्रशासनले सहजिकरण गर्ने भएको हो जिल्ला प्रशासनले केही मोडालिटी परिवर्तन गरिए पनि वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने छ ।
यसअघि उपत्यकामा थपिएको एक साता लामो निषेधाज्ञा जेठ २० गते सकिँदैछ । उक्त निषेधाज्ञामा भने खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । केही समय यता काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दरमा केही कमी आएको छ । विज्ञहरुले कोरोना संक्रमण दर घटेपनि जोखिम भने यथावत रहेको बताएका छन् ।
Previous छोरी एरिकाको हात छैन भन्दै फेरी भक्कानिए ऋषी धमला, लकडाउन खुलेपछि छोरीको हात हाल्न विदेश जाने तयारीमा छन् धमला दम्पत्ति, आखिर के भएको हो धमलाकी पुत्रि एरिकालाई ? भक्कानिएको भिडियो भाइरल
Next दरवार ह त्याकाण्ड हुँदा आफु अगाडी नै रहेको र आफुले देखेको कुरा यसरि बताइन हिमानिले (भिडियो सहित )